Moments leh saaxiibo 43
Miyuu qofku ku noolaan karaa, dhammeeyaa hawlihiisa, oo u dhiman karaa in ka badan hal nolos inta uu ku egtahay sanadkaan dhulka?
Haa; wuu awoodaa. Xaqiiqda dib-u-noolaanshaha dabcan waa la siiyay su'aasha. Dib-u-nooleynta - sida waxbarista ah, ninkaasi, oo loo arkaa inuu yahay maskax ahaan, wuxuu ku soo baxayaa jidhka jidhka oo ah inuu barto waxyaabo gaar ah iyo inuu qabto shaqooyinka qaarkood ee adduunka noloshaas, ka dibna ka tago jidhkiisa taas oo markaa dhinta, taasina wixii ka dambeeya Waqtiga uu qaato jirka kale ee jirka, ka dibna mid kale iyo weli kuwa kale ilaa shaqadiisa la dhammeeyo, aqoon ayaa lagu kasbaday oo wuxuu ka qalinjabiyaa dugsiga nolosha — reincarnation waxaa si aqlabiyad leh u aqbalay kuwa gartay barashada iyo ku dabaqay sharaxaadda sinnaan la'aanta ka jirta ixtiraam kasta oo carruurta ay leeyihiin waalid isku mid ah, iyo ragga iyo dumarka ay yaqaannaan ee xilalka ka haya nolosha duwan kuna kala duwan horumarka dabeecadda, iyadoo aan loo eegin dhaxalkooda, deegaankooda iyo fursadaha.
In kasta oo markii la yaqaanay, haddana qarniyo badan ay caqiidada dib u noqoshada waxay ajanabi u ahayd ilbaxnimada iyo waxbarista Reer Galbeedka. Maaddaama maskaxdu si fiican u barato maadada ma aha oo kaliya inay la qabsan doonto reincarnation sida soojeedinta, laakiin waxay u fahmi doontaa sida xaqiiqada ah, taas oo fahanka markaa furitaanka aragtida cusub iyo dhibaatooyinka nolosha. Su'aasha waxaa laga weydiiyaa aragti ka duwan kan kuwa sida caadiga ah la dhigo. Waxaa badanaa la fahamsan yahay in marka maskaxdu ay leedahay jir kale oo jir ahaaneed oo loo diyaariyey, oo uu jidhku galayo, waxay qaadataa jidhkaas oo waxay ku sii wadataa shaqadiisa iyo waaya-aragnimadii meesha maskaxda uga hartay nolosha ugu dambeysa, maadaama uu lebenku ku daro leben kale kuwii uu shaqada ka qabtay maalin ka hor, ama sida xisaabiye uu u fuliyo deymaha iyo dhibcaha buugaagta uu ku hawlan yahay. Tani waxay qusaysaa aqlabiyadda, malaha, kuwa ku nool. Waxay ku yimaadaan nolosha iyagoo culeysyadooda wata, oo waxay u mareeyaan si xun, sida dameeraha culayska saaran, ama way diidaan oo waxay ku garaacayaan waajibaadka iyo waxkasta oo guud ahaanta ah, wayna diidaan inay aqbalaan oo qaadaan mas'uuliyadaha, sida baqlahoodu jebiyaan oo iska tuuraan culayska. iyo wax kasta oo ku yimaada jidkooda.
Maskaxda ku soo biirtay Galbeedka waxay ka amar duwan yihiin kuwa bariga, sida lagu muujiyey xoogga ilbaxnimada, hal-abuurka, hagaajinta, qaababka joogtada ah iyo waxqabadka maalinlaha ah ee Galbeedka. Cadaadiska iyo culeyska fekerka ayaa laga yaabaa inuu hadda ka weynaado waqtigii hore; laakiin sababta oo ah waxyaabaha aadka u xooga badan ayaa hadda waxbadan la qaban karaa hadda wixii la qaban ka hor.
Waqtiga iyo jawigu waxay xadidi karaan shaqada nin, laakiin ninku wuxuu u adeegsan karaa waqtiyo iyo bey'addiisa shaqadiisa. Ninku si toos ah ayuu noloshiisa ugu dhex mari karaa, ama wuxuu ka soo kaban karaa jahwareer wuxuuna noqon karaa jilaa caan ku ah taariikhda adduunka isla markaana shaqo dheer siin kara taariikhyahannadiisa. Taariikhda nin ayaa laga yaabaa in lagu qoro dhagaxa xabaasha sida: “Halkan waxaa yaal meydka Henry Jinks. Wuxuu ku dhashay magaaladan 1854. Wuxuu koray, guursaday, wuxuu dhalay laba carruur ah, wuxuu iibsaday oo iibiyay badeecad, wuuna dhintay, ”ama taariikhdu waxay noqon kartaa amar ka duwan, sida tii Isaac Newton ama Abraham Lincoln. Qofka is-dhaqdhaqaaqa, oo aan sugin duruufaha loogu yeedhay inuu ku dhaqaaqo, ma laha xad u lahaan doono. Haddii nin doonayo inuu sidaa sameeyo, waxaa laga yaabaa inuu ka gudbo hal weji oo nolosha ah iyo mid kale, oo uu ka shaqeeyo wejigaas iyo kan kale, sida Lincoln sameeyey; Haddiise uu sii wato shaqada, uu ku sii jeedo inuu wax uun dunida ku qabto oo uu ku hago ujeeddo xaq ah, wuxuu lahaan doonaa wax weyn oo aamin ah oo isaga loo qabto, kaas oo aan isaga qaban doonin oo kali ah nolosha dad badan naftiisa laakiin wuxuu samayn doonaa shaqo aduunyada; sidaas awgeedna adduunku noloshiisa mustaqbalku wuxuu u noqon doonaa gargaar halkii laga horjoogsan lahaa isaga iyo shaqadiisa. Tani waxay qusaysaa qofkasta oo bulshada ka mid ah oo qabtay shaqadii kana soo gudbay hal xarun oo nololeed una wareegta xarun kale.
Laakiin waxaa jira rag iyagu, ayadoon loo eegin meesha ay ku dhasheen ama saldhigga nololeed, ku nool nolol gudaha ah. Noloshan gudeheeda ee ninku dhif ayey ku tahay diiwaanka bulshada, waana dhif iyo naadir in lagu yaqaan dadka is yaqaan. Sida nin u dhex mari karo saldhigyo badan oo nolosha bulshada ah, gaarista qofkasta oo ay noqon karto shaqada nin kale, sidaa darteed ninka ku nool nolol gudaha ah wuxuu ku baran karaa hal nolol jir ahaaneed inuu barto kaliya casharadaas oo uu sameeyo shaqadan waxaa loogu talagalay inuu ku noolaado noloshaas, laakiin waxaa suuragal ah inuu barto oo qabto shaqadii ay ku kaliftay inuu dib ugula noolaado si uu u dhammaystiro, haddii uu diido ama uu ku guleysan waayo shaqadiisii ​​ugu horreysay ee loo qoondeeyay.
Waxay kuxirantahay ninka, iyo waxa uu rabo inuu sameeyo. Badanaa booska ninku ama jawigiisu wuu isbedelaa markay ku dhamaadaan hal shaqo iyo u diyaarsanaanta inay bilaabaan shaqo kale, in kasta oo aysan taasi markasta ahayn kiisku. Isbeddello shaqo ama dabeecad kasta waxay astaan ​​u noqon kartaa nolol ka duwan, in kasta oo laga yaabo in aysan had iyo jeer la mid noqon karin shaqada jir ahaan. Mid ka mid ah wuxuu ku dhalan karaa qoyska tuugada oo lagu qasbay inuu la shaqeeyo. Xilli dambe waxaa laga yaabaa inuu arko khaladaadka tuugada oo uu uga tago ganacsi daacad ah. Waxaa laga yaabaa inuu ka tago ganacsiga si uu ugu dagaallamo dagaal. Gabagabadi wuu imaan karaa meheraddiisa, laakiin wuxuu rajaynayaa himilooyin aan ku xirnayn ganacsigiisa; oo laga yaabo inuu garto wax badan oo uu doonayo. Isbeddelada noloshiisa waxay u muuqan karaan inay ka dhasheen xaalado lagu tuuray, kuwanna waxaa keenay dhacdooyin shil ah. Laakiin iyagu ma ay ahayn. Isbeddel kasta oo ku yimaada nolosha noocaas ah waxaa suurtageliyay aragtidiisa maanka. Dabeecaddiisa maskaxdu waxay abuurtay ama u furtay jidka rabitaanka, sidaa darteedna waxaa la keenay fursadda lagu beddelayo. Dhaqanka maskaxda ayaa keena ama u oggolaada isbeddelada nin ee xaaladaha nolosha. Dabeecad ahaan maskaxdiisa nin wuxuu ku qabsan karaa hal nolosha howsha nolosha dad badan.